I-Riverfront Trail House. - I-Airbnb
I-Riverfront Trail House.
Isendaweni ephakathi eduze namakhanda emizila eminingi e-Logan WV. Ikamelo lethu elisanda kulungiswa elingu-2, indlwana yokugeza engu-2 ilala abantu abangaba ngu-10. Jabulela ubulula bokukhulula imishini yakho nokungabi nesidingo sokuthi uyifake emzileni. Indlu yethu inikeza indawo yokupaka evulekile yezimoto eziningi, ama-haulers nama-ATV. Jabulela izintaba zethu ze-WV ngokusuka emizileni noma emphemeni wethu omuhle obheke umfula i-Guyandotte. Uma ufuna ubulula ngenani elihle, ungabe usabheka kude.
Indlu inezindawo ezingu-3 ezisetshenziswa abantu bonke (igumbi lokuphumula, i-den ne-sunroom). Kunezindlela eziningi zokulala ezihlanganisa amakamelo okulala amabili (ikamelo lokulala 1 - indlovukazi nekamelo lokulala 2 - 2 imibhede egcwele), i-futon egcwele enesitezi esinezitezi ezimbili egumbini lokuphumula kanye nosofa ogcwele wokulala egumbini lokuphumula.
Indlu yethu ihlanganisa indawo enhle yangaphandle enomfula wokudoba noma wokugwedla ngesikebhe. Pheka isidlo sakusihlwa ku-grill yethu egcwele ye-propane bese udla emphemeni wethu omuhle obheke umfula i-Guyandotte.
Jabulela ubulula bekhaya nge-inthanethi/i-wifi yethu enejubane eliphakeme, ama-smart tv amabili (58"igumbi lokuphumula kanye ne-55" den), umshini wokuwasha nokomisa, umshini wokugeza izitsha nendawo yokungena engenakhiye.
Ukupaka okuvulekile emgwaqeni ongenayo kanye nendawo eyengeziwe yezimoto ezengeziwe, ama-haulers nama-ATV.
Itholakala kalula enkabeni yesistimu yomzila we-Hatfield McCoy. Ngaphansi kwamamayela angu-2 ukusuka emizileni emibili ehlukene yemizila ye-B Bearreon.
Hamba noma ugibe i-ATV yakho uye ezindaweni zokudlela zasendaweni nasezitolo zokuthenga. Sitholakala eduze ne-Morrison 's Drive Inn. Indawo yokudlela yase-Morrison' s Drive Inn ibilokhu inikeza ukudla kusukela ngo-1947.
I-Logan yidolobha elinobungane le-ATV. Gibela umshini wakho emigwaqweni yethu yesifunda, uhlola yonke idolobha lethu.
4.92 · 64 okushiwo abanye
Indlu yethu enamakamelo okulala angu-2 (ilala abantu abangu-10) itholakala kalula eduze nemizila, izindawo zokudlela kanye neziteshi zegesi. Isistimu yomzila we-Be Bear iyatholakala ezindaweni ezimbili, kokubili emakhilomitheni amabili ukusuka ekhaya lethu. I-Morrison 's drive Inn isezinyathelweni ezingu- kuphela, inikeza ama-hotdogs amahle kakhulu, iziyingi ze-anyanisi nokuxukuza kusukela ngo-1947. Kunezindawo ezimbili zokudlela zase-Mexico ne-Pizza Hut engamakhilomitha angu- ukusuka endlini. Iziteshi ezimbili zegesi nazo zisekude ngezinyathelo ezingu- kuphela.
Siphila eduze nezindlwana zethu eziqashisayo ze-Airbnb futhi sizotholakala ngeselula (ngomyalezo noma ngocingo) ukusiza izivakashi zethu nganoma yimuphi umbuzo/isidingo esingase sivele ngesikhathi sokuhlala kwazo. Sifuna ukusiza izivakashi zethu ngokuba nokuvakasha okungcono kakhulu ngangokunokwenzeka.
Siphila eduze nezindlwana zethu eziqashisayo ze-Airbnb futhi sizotholakala ngeselula (ngomyalezo noma ngocingo) ukusiza izivakashi zethu nganoma yimuphi umbuzo/isidingo esingase si…